09/07/13 ~ Myanmar News Updates
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း နန်းသီရိမောင်ပြောကြား
11:28:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
နေ့ စဉ်ထုတ်ရွှေနိုင်ငံသစ်သတင်းစာမှ ယခုလတ်တလော ဆရာတော်ဥူးဝီရသူဦးဆောင်သည့် မျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၇်ျ နာမည်ကြီးမော်ဒယ် နန်းသီရိမောင်နှင့် အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားကဇာတ် ရုံတွင်ပြုကျင်းပပြုလုပ်မည့် Aroma Zulu Wedding Show တွင်ပါဝင် ရှိုး လျှောက် ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ် ရွှေနိုင်ငံသစ် သတင်းစာမှ သတင်းထောက် မာဂျေ ကသွားရောက်မေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုရှိုးကို SKYNET နဲ့ MRTV-4 ကလည်းပြန်လည်ပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
NTM။ ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါရှင့်
မေး။ အခုဆရာတော်ဥူးဝီရသူတို့ က မျိုးစောင့်ဥပဒေအတွက် လက်မှတ်များစုဆောင်းနေပါတယ်။ အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီမလေး အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးများပေးချင်လဲမသိဘူး
NTM။ နန်းနန်းအနေနဲ့ ပထမဆုံးပြောချင်တာ နိုင်ငံရေးကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုတာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီဥပဒေထဲက အချက်တွေကိုလည်း အများကြီးမဖတ်ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲလိုမျိုးကန့် သတ်မှုတွေရှိနေတာမျိုးကြီးတွေ မနှစ်သက်ပါဘူး။ လူကိုလူလို့ ပဲမြင်ပါတယ်။ ဥူးဝီရသူကိုလည်း သံဃာတစ်ပါးအနေနဲ့ ရှုမြင်ဖို့ နန်းနန်းနည်းနည်းတွေဝေမိပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ သားတော်တစ်ပါးကို ဝေဖန်ဖို့ လည်း နန်းနန်းဘုရားကိုကြောက်ပါသေးတယ်ရှင့်။
မေး။ Miss International ဖြစ်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာအနေနဲ့ လည်း ၉၆၉ကို လက်မခံဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးရော?
NTM။ ဟုတ်ကဲ့။ မမနန်းခင်က နန်းနန်းလေးစားရတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ ရဲ့ လုပ်ရပ်မှန်ကန်လိမ့်မယ်လို့ နန်းနန်းအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ သူ့ ကိုလည်း ၉၆၉မှာအသုံးချဖို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်လို့ လဲ ထုတ်ဖော်ပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ နန်းကိုလည်း အခုလာပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ၉၆၉ကဘယ်လိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး ပရိုမိုရှင်းလာလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ ၉၆၉ က အကြမ်းမဖက်ဘူးလို့ လဲပြောသေးတယ်၊ အတင်းအဓမ္မ အကြမ်းဖက်ပြီးလက်ခံခိုင်းနေတယ်။ နန်းနန်းတို့ ကပွင့်လင်းသူတွေပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်မှာပဲ။ အတင်းလာပြောလို့ လဲလက်ခံလိုက်မယ့် လူစားမျိုးထဲမှာ နန်းနန်းမပါဘူး။
မေး။ အခုလို မျိုးစောင့်ဥပဒေထဲမှာ လက်ထပ်ဖို့ အတွက် လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့် သတ်ထားတာနဲ့ ရောဘာပြောလိုပါသလဲ
NTM။ နန်းနန်းတို့ ကဟောလီးဝုဒ်ထိ ထိုးဖောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာ။ ဒီလို အတွေးခေါင်လို့ မရဘူး၊ ခရစ်ယာန်နဲ့လည်းဆက်ဆံရမယ်၊ အစ္စလာမ်နဲ့ လည်း ဆက်ဆံရမယ်၊ လူဖြူလူမည်းအကုန်လုံးနဲ့ ဆက်ဆံရမှာပါ။
နိုင်ငံတကာက ဖက်ရှင်မင်းသားတွေလာရင်လည်း ကူးလူးဆက်ဆံရတာတွေရှိလာမယ်။ လက်ထပ်ဖို့ ဆိုတာကတော့ နောက်ထားပါ။ ဥပဒေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုက မရိုးသားဘူးလို့ နန်းနန်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါရစေ။ နန်းနိုင်ငံရေး အရမ်းမသိပေမယ့် ဒီလောက်ကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်ရှင့်။
နန်းနန်းလေးစားရတဲ့ ဦးကျော်သူ၊ မမနန်းခင်ဇေယျာ၊ ကိုနေတိုးတို့ ကလည်း ပြတ်ပြတ်သားသားပြောပြီးသားမို့ နန်းနန်းလည်း သူတို့ နဲ့ ထပ်တူပါပဲ။ နန်းနန်းအဲ့ဒီအမျိုးစောင့်ဥပဒေကြီးကို စိတ်မ၀င်စားသလို လက်လည်းမခံနိုင်ပါဘူး၊ နန်းနန်းလျှောက်တဲ့ အနုပညာလမ်းကို နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံသူတွေအနေနဲ့ မပိတ်ဆို့ စေချင်ပါဘူး။
မေး။ ဟုတ်ပြီ၊ ညီမလေးရေ။နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာလေးရှိရင်ရော
ပြောပါဦး၊ ပရိသတ်ကိုရော ဘာများပြောချင်သေးလည်း?
NTM။ နိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ လည်း အနုပညာရှင်တွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လက်ရှိအနုပညာလောကကို ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဖို့ မကျိုးစားပါနဲ့ လို့ ။
နန်းနန်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကိုလည်း နန်းနန်းကအရမ်းချစ်ပါတယ်လို့ ၊ နန်းနန်းရဲ့ ပရိသတ်ကြီး ကျန်းမာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေလို့ ၊ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အရောင်တွေ မစွန်းထင်းကြပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ အခုလိုအချိန်ပေးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
NTM။ ဟုတ်ကဲ့။ နန်းနန်းကလည်း အကိုတို့ ဂျာနယ်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
10:14:00 PM Myanmar Newsupdates 1 comment
အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုရာတွင် အသုံးများသော၊ အသုံးဝင်သောစကားလုံးတွဲများ (Phrases) နှင့် စကားပြောပုံစံ (Pattern) များကိုဆက်လက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသောဥပမာဝါကျများကိုအခြေခံကာလိုအပ်သလိုဆပွားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ I didn't mean to + (verb) -မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး
တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစိတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နှုတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်းမရည်ရွယ်ဘဲထိခိုက် ဝမ်းနည်းစေသောပုံစံမျိုးတွင် အဆိုပါ ပုံစံကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ - - I didn't mean to hurt your feelings. မင်းရဲ့ ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ - I didn't mean to call you so late. မင်းကိုနောက်ကျပြီးမှ ဖုံးဆက်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ - I didn't mean to lie about what happened. ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းကိုလိမ်ပြောဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ - I didn't mean to embarrass you. မင်းကိုအခက်တွေ့ဖို့၊ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်သွားစေဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ - I didn't mean to stay out so late. မင်းကိုအပြင်မှာတော်တော် နောက်ကျတဲ့ နေဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ - I did not mean to cause trouble. ပြဿနာဖြစ်စေဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။
I don't have time to + (verb) - အချိန်မရဘူး၊ အချိန်မရှိဘူး။ ကိစ္စတစ်ခု၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက် ပြုလုပ်ရန် အချိန်မရသည့်အခါ၊ အချိန်မရှိသည့် အတွက် ပြောပြသည့် ပုံစံမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ - - I don't have time to explain. ရှင်းပြနေဖို့ အချိန်မရှိဘူး။
- I don't have time to eat. စားဖို့တောင် အချိန်မရဘူး။
- I don't have time to exercise. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်မရဘူး။
- I don't have time to watch my favorite TV show. ကျွန်တော့် အကြိုက် တီဗွီအစီအစဉ် ကြည့်ဖို့တောင် အချိန်မရဘူး။
I promise not to + (verb) - မ ____ ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ မလုပ်ပါ မပြောပါ မသွားပါ စသည်ဖြင့် ကတိပေးသည့် ပုံစံတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ - - I promise not to tell. မပြောဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်။
- I promise not to go without you. မင်းမပါဘဲဘယ်မှ မသွားပါဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်။ -
I promise not to be so late. နောက်မကျပါဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်။
- I promise not to hurt your feelings. မင်းစိတ် မထိခိုက်စေရပါဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်။
- I promise not to wake you up. မင်းကိုမနိုးပါဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်။ “အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာသူတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးတိုးတက်ပါစေ
Baby Maung ရဲ့ အလှအပများကို ခံစားရအောင်
10:10:00 PM Myanmar Newsupdates2comments
စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) ဘာနဲ့ ထမင်းစားလဲ
တစ်လောက စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ (ယာယီ) ကို သမ္မတ ကြီးက သိန်း၅၀၀ လှူဒါန်း ဆိုပြီး ထွက်
လာတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သတင်းတွေ က ရှုပ်ကုန်ကြတယ်။ တဖက်ပိတ်တွေး တဲ့ သူတွေရဲ့ဂွင် ထဲ
ရောက် သွားတယ်လို့ ပဲပြောရ မလားပဲ။ အကုန်လုံးကို စုံနေအောင်ရေးကြ ၊ပြောကြနဲ့ရှုပ်နေ
တာပဲ။ အဲဒီမှာ သေချာအောင်ရှင်း ထားတာ ကတော့ သမ္မတကြီးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေ ထဲ က လှူတာ
မဟုတ်ဘဲ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကိုေ အာင်ြ မင်အောင်
ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ နိုင်ငံတော်ပိုင် ဘတ်ဂျက်ငွေတွေ ထဲက လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ ပါပဲ။
အဲ့ဒီလိုကိုယ် ထင်ရာဆွဲတွေး တတ် တဲ့ လူတွေ ထဲမှာလဲ နိုင်ငံရေး ဂုရု ဆိုသူတွေကော၊ စာရေး
ဆရာဆိုသူတွေပါပါလာတာတွေ့ ရတယ်။ နောက်ပြီးသမ္မတကြီးလှူလိုက်တဲ့ ငွေကို လက်ခံခဲ့တဲ့
စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ကိုပါဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာတွေ့ ရတယ်။
အဲ့ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ဂရုကြီးတွေကို တချက်လောက် မေးစမ်း ကြည့် ချင်ပါသည်။
၈၈မျိုးဆက် ဆိုသော အဖွဲ့ ကော ဘာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင် စားသောက်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်နေ
ကြသလဲဆိုတာပါပဲ။အစိုးရနှင့် ပြေလည်သော အဖွဲ့ များကို ခလောက် ဆန်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်
ကျော်ကြီးများကိုလဲ နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိပါသည်။ ယခုအချိန်ကာလသည် နေရာ တကာ
မှာအမျိုးမျိုးလိုက်လံဝေဖန်မည့်အစား မိမိတို့ ရည်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက်ကို တစ်စည်း တစ်လုံး
မျိုးပြုလုပ်နေကြလျှင်ဖြင့် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်အတွက် ရင်လေးစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
၈၈ ကျောင်းသား သုံးဦး ပေါင်းပြီး ရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီလက်ရာများ ပါဝင် သော ဂစ်တာ တစ်လုံး ကို ကျပ်သိန်းပေါင်း ၅၈၈ သိန်း ဖြင့် Sky Net ရုပ်သံလိုင်းမှ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးဝင်းနို င် က ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ဂီတပညာရှင် အယောက် ၈ဝ ၏ဖြေဖျော်မှု၊ ၈၈ ကျောင်းသားေ ခါင်းဆောင် များ ထောင် ထဲ ရှိနေစဉ်အတွင်း ရေးစပ်ထားသော ကဗျာ ရွတ်ဆိုမှုများ ပါဝင်သည့် ကုသိုလ်ဖြစ် ပွဲတော်မှ စုစုေ ပါင်း ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၃,၀၀၀ ကျော် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီအလှူငွေများအနက် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၆ဝဝ ကို ရေေ ဘး ဒုက္ခသည်၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရေးအခင်း ဖြစ်လျက်ရှိတဲ့ ရခိုင်ဒေသ၊ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ အတွက် အသီးသီးလှူဒါန်းမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ဆုတံဆိပ်များမှ Gwangju Prize for Human Rights ဆုသည် ဆုကြေးအဖြစ် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ချီးမြှင့်လေ့ရှိသည်။ The Civil Courage Prize သည် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဆုကြေးပါဝင်ပြီး The Student Peace Prize သည် စတာလင်ပေါင် ၅၀၀၀ ခန့်ရရှိသည်။ The John Humphrey Freedom Award ကတော့ ကနေဒါဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ခန့်ရရှိသည်။
အထက်ပါ ကိန်းဂဏန်များကို ကြည့်ပါက ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်သည် တက္က သိုလ် ကျောင်းသားဘ၀အဆုံးမှ ယနေ့ နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေးသမားအထိ ပြင်ပတွင် ၄ နှစ် မျှသာ နေခဲ့ရသည်။ ထို ၄ နှစ်ကာလအတွင်းလည်း စီးပွားရေးလုပ်ချိန် မရခဲ့ပါ။ သို့သော် ဆုတံဆိပ်များမှ ရရှိငွေ သည် ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းအထက်တွင် ရှိပြီး ကျန်သည့် ရောင်းချမှုများ၊ လှူဒါန်း ကူညီမှုများမှ ရရှိငွေသည် ကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု တန်ဖိုးကို တွက်ပါက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်သည် ကချင်ပြည်နယ်သွားရောက်စဉ်အတွင်းနှင့် အခြား လမ်းကြောင်းများမှ တရားမ၀င် ရရှိနိုင်သည့် ငွေများမပါ ငွေကျပ် သိန်း ၂ ထောင် ကျော် ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ထို့ ပြင်၈၈ငွေရတုပွဲမှရရှိသော ငွေကျပ်သိန်း ၁၈၃၆သိန်းမှာ လဲ မည်သည့် အလှူအတန်း လှုပ်ရှားမှုမျိုးမှ ထွက်၍ မလာသေးပေ။
ထို့ အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတမှ နိုင်ငံတော်ပိုင် ဘတ်ဂျက်ဖြင့် လှူတန်းသည့် ကိစ္စကို
ပြောနေမည့်အစားနိုင်ငံတော်ကို ခုတုန်းလုပ်ကာ လုပ်စားနေကြသောနိုင်ငံရေး သမားများအား
9:43:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
Vanity Fair ၏ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထူးထုတ်မျက်နှာဖုံးရှင် ကိတ်အပ်တန်
ကိတ်သည် (၁၉၁၃)ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်သည့် မဂ္ဂဇင်းကြီး၏ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အထူးထုတ် မျက်နှာဖုံးရှင်အဖြစ် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခွင့် ရခဲ့ရာ ပထမဆုံး မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး ပုံရိပ်၏ ခေတ်ဟောင်းရိပ် လွှမ်းသော ဖက်ရှင်ဖြင့် ညှို့ချက်ပြင်းပြင်း ကိုယ်ဟန်ပြပေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကျော် ဖျော်ဖြေရေး မဂ္ဂဇင်းကြီး Vanity Fairသည် မဂ္ဂဇင်းတိုက် ရပ်တည်မှု သက်တမ်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အထူးထုတ်အတွက် ကိတ်အပ်တန်ကို အထူးတလည် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကိတ်သည် (၁၉၁၃)ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်သည့် မဂ္ဂဇင်းကြီး၏ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အထူးထုတ် မျက်နှာဖုံးရှင်အဖြစ် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခွင့် ရခဲ့ရာ ပထမဆုံး မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး ပုံရိပ်၏ ခေတ်ဟောင်းရိပ် လွှမ်းသော ဖက်ရှင်ဖြင့် ညှို့ချက်ပြင်းပြင်း ကိုယ်ဟန်ပြပေးခဲ့သည်။ အသက်(၂၁)နှစ်ရှိ ကိတ်သည် လက်ထဲတွင် မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ကို ကိုင်ကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် ရွှေရောင် အတွင်းခံ ဝတ်စုံဖြင့် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Vanity Fairသည် အထူးထုတ် မဂ္ဂဇင်းအတွက် ထင်ရှားသော စာရေးဆရာများ၊ ဓာတ်ပုံဆရာများကို ဖိတ်ကြား အသုံးပြုခဲ့သလို ကိတ်၏ ဓာတ်ပုံကို အသက်အဝင်ဆုံး ရိုက်ကူးပေးနိုင်ရန် နာမည်ကျော် ဓာတ်ပုံဆရာ အန်နီလီဘိုဗစ်ဇ်ကို တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
ကိတ်သည် (၁၉၁၃)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ထုတ် Dress & Vanity Fair မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး ပုံရိပ်ကို ပြန်လည်ကိုးကားကာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Vanity Fair၏ အယ်ဒီတာ ဂရေဒန်ကာတာက "ခေတ်တွေ အများကြီး ကျော်ဖြတ် ပြောင်းလဲပြီးချိန်မှာ ဒီလို ပထမဆုံး မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး အငွေ့အသက်မျိုးကို ပြန်ဖော်ကျူးရတာ တစ်မျိုးတော့ ထူးခြားနေပါတယ်"ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ယခုအထူးထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် သမိုင်းတစ်လျှောက် အထင်ကရ ဖြစ်ခဲ့သည့် ဆောင်းပါးများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် ဓာတ်ပုံများကိုပါ ပြန်လည် ဖော်ပြထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မော်ဒယ်ချောကိတ်အပ်ပ်တန်ရဲ့ မဖော့်တဖော် မပေါ့်တပေါ် ဣတ္ထိယအလှကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်ကို ကလစ်ပြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
8:59:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
"How to we get rid of blackheads and whiteheads" - www.casm.in
ခင်ဝင့်ဝါ ဆု (၄) ဆု ရရှိ
5:09:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
From : .. mg satan
Miss Supranational ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ Official Webpage မှာ
မိမိနှစ်သက်ရာ ပြိုင်ပွဲဝင်ကို အနဲဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့
၁၀မဲကို ၅ဒေါ်လာပေးပြီးတော့ Credit/Debit Card Payment System နဲ့ငွေချေပြီးတော့မဲပေးရတဲ့ Online Voting ပြိုင်ပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Miss Myanmar Khin Wint Wah ကမဲအရေအတွက် 3600 နဲ့
ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကိုအပြတ်အသတ်ဖြတ်ကျော်ပြီးMiss Supranational Internet! ဆုကိုရရှိသွားပါတယ်။
Miss Supranational Internet! ဆုကိုရရှိသွားတဲ့အတွက်
ခင်ဝင့်ဝါဟာ ဒီညမှာကျင်းပမဲ့ Miss Supranational ပြိုင်ပွဲရဲ့
Final ပွဲစဉ်မှာ Top (20) စာရင်းထဲကို အလိုအလျောက်ပါပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။
မူရင်းပြိုင်ပွဲကပေးတဲ့ Miss Supranational Internet! ဆုအပြင်
Missosology website ကနေပေးတဲ့
Face of Miss Supranational 2013!
Belarus website ကပေးတဲ့
Most Beautiful Girl in the World! စတဲ့ Title (4)ခုကို
လက်ရှိအချိန်မှာ ခင်ဝင့်ဝါ တစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်နေပြီ
Miss Myanmar Khin Wint Wah ရရှိခဲ့တဲ့ဆုလေးခုစလုံးဟာ
ပေးအပ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Vote လုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိတ်သတ်များရဲ့
Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲရဲ့ Final ပွဲစဉ်
မှာ Miss Myanmar Khin Wint Wah တစ်ယောက်
1st Runner-up ဆုကိုရရှိပါစေလို့
အောက်ကလင့်ခ်တွေမှာ စောင့်ကြည့်နိင်ပါတယ်။ @Shine Sezar
ဈေးသက်သာတဲ့ မှဲ့ ခြောက်နဲ့ တင်းတိပ် ပျောက်နည်း
5:08:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အိပ်ယာဝင်မယ့် အချိန်မှာလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ မဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ် ရှိနေသူတွေ အတွက် အဆင်ပြေ မယ့် နည်းလမ်း ကောင်းလေးပါ။ ဖရဲသီးမှာပါတဲ့ ရေဓာတ်က မဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ်တို့ကို ပျောက် ကင်း အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဓာတုဆေးဝါးတွေမပါတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ။
ဒီ နည်းကို မလုပ်ချင်သူတွေအတွက်ကတော့ ဖရဲသီးစားတဲ့ အခါ တိုင်း အောက် ခံ အဖြူသားထိ စားနိုင်ပါ တယ်။ ဖရဲသီး ကို စားခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ ကောင်းမွန်ပြီး ကျောက်ကပ်၊ ဆီး၊ အသဲ၊ အဆုတ် စတဲ့ ရောဂါရှိသူတွေ အတွက် လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ပါဘဲ။ အားလုံး ဖရဲသီးစားတိုင်း အောက်ခံ အဖြူသားပါအောင် စားလိုက် ကြရအောင်နော်။
မျက်နှာပေါ်က အမဲစက် ပျောက်နည်းမျက်နှာပေါ်မှာ အမည်း စက် ရှိ လို စိတ် ညစ်နေတဲ့ ပျိုရွယ်သူတွေအတွက် နည်းလမ်း ကောင်းလေး တစ်ခု ကို ထပ်ပေးပါမယ်။တချို့ ၀က်ခြံရှိတဲ့ ပျိုရွယ်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တာက ၀က်ခြံကို မမှည့်ခင် ညစ်ထုတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တာ ကြောင့် မျက်နှာပေါ်တွင် အမာရွတ်(သို) အမည်းစက်များ ကျန်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ထိုသို့ အမည်းစက်များရှိနေတာကို ဒီ က နေ့ ခေတ်မှာတော့ ခေတ် မီဆေးဝါးတွေ ပေါလာသော်လည်းဘဲ သဘာဝ ဆေးနည်ကောင်းလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။
သိတာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်း ကောင်းလေးမို့ပါ။ လုပ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ လုပ်နည်းလေးကတော့ လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းပါ။ အိမ်ရှင် မများ ဟင်းချိုချက်တဲ့အခါမှာ ထည့်ခတ်တဲ့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် လေး အနည်းငယ်နဲ့ ဒိန်ချည် ကို ရောသမပြီး အမည်း စက်ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို လိမ်းပေး ပါ။
နာရီဝက်(သို့) ၄၅ မိနစ်ခန့် ကြာ အောင် ထားပေးပြီး မျက်နှာကို သန့်စင်အောင် သစ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီလို နည်းအတိုင်း နေ့စဉ်လုပ်ပေးပါက တစ်ပတ်အတွင်းသိသာသိသာ ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့သဘာဝ ဆေးနည်း ကောင်းလေးပါ။ပိုက်ဆံမကုန်မယ့် နည်းလမ်းလေးပါ။ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး ကုသစရာမလို တဲ့ နည်းလမ်း ကောင်းလေးမို့ myanmar local news မှ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။
ဖရဲသီး အောက်ခံအဖြူအသားကို ဓား(သို) ဇွန်းဖြင့် ပါးပါးလှီးပြီး မျက်နှာပေါ် မှာရှိတဲ့ မဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ် ရှိတဲ့ နေရာပေါ်မှာ တင်ပေးပါ။ ဒီနည်းကို မ လုပ်ခင် မျက်နှာကို သန့်စင်အောင် အရင်သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက် ရပါမယ်။ မျက်နှာ သန့်စင်ပြီးတာနဲ့ ဖရဲသီး အောက်ခံ အဖြူသာကို ပါးပါးလှီးပြီး မျက်နှာပေါ်တင်ပေးပြီး နာရီ တော်တော်ကြာ အောင် တင်ထားပေးရပါမယ်။
သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Hardware Information တွကေို အသေးစိတ်ပြပေးမယ့် Speccy
သင့်ကွန်ပြူတာမှာပါရှိတဲ့ Hardware တွေ အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ Speccy ဆိုတဲ့ Freeware ကိုသုံးပါ။ နာမည်ကြီး CCleaner ရဲ့ Developers တွကေ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Portable Version လည်းရှိပါတယ်။ တစ်ခြားကွန်ပြူတာက Hardware တွကေို စစ်ဆေးချင်ရင်တော့ Portable Version ကအဆင်ပြေပါတယ်။
Speccyကိုျြunလို့ Error Message ကျလာရင် Administrator အနေနဲ့ျြun ပေးရပါမယ်။ျြun ပြီးရင် သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Detailed Overview ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Section တစ်ခုချင်းစီမှာ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွကေိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ CPU panel မှာ Processor က Support ပေးတဲ့ Technology တွရေဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွကေို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Code Name, Family, Bus Speeds, Temperature တွနေဲ့ တစ်ခြား အချက်အလက်တွကေို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Graph Indicators တွကေို နှိပ်ပြီး Temperature, Speed တွကေိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ျြAM panel မှာတော့ Brand, Part Number, Frequency, Latencyနဲ့ တစ်ခြားအချက်အလက်တွကေို တွေ့မြင်နိုင်ပြီးျြAM ထပ်စိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ Upgrade လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဒီသတင်းအချက်အလက်တွကေ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Motherboard Page မှာတော့ Chipset, BIOS တွကေို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Speccy က သင့် ကွန်ပြူတာရဲ့ Hardware နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွကေို အသေးစိတ်ပြပေးနိုင်ပြီး အဲဒီသတင်းအချက်အလက်တွဟော ကွန်ပြူတာ ပြဿနာတွကေို အဖြေရှာတဲ့ နေရာမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ Hardware တွရေဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွကေို Snapshot အနေနဲ့ သိမ်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီအတွက် နောင်တစ်ချိန်မှာ ပြန်ပြီးသိရှိနိင်သလို ကွန်ပြူတာ ပြဿနာတက်တဲ့အချိန်တွမှောလည်း Support Team တွဆေီ သတင်းအချက်အလက်တွကေို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
Speccy ကို XP,Vista,2000,2003 နွဲျှ့indows7(32 & 64-bit versions) တို့မှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Vanity Fair ၏ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထူးထုတ်မျက်နှာဖုံးရှ...
သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Hardware Information တွကေို အသေးစ...